UTrump uthi i-US kunye neGuatemala batyikitye isivumelwano 'esiKhuselekileyo seLizwe leSithathu' ukuze kuthintelwe abantu abafuna indawo yokukhosela. - Usnews
UTrump uthi i-US kunye neGuatemala batyikitye isivumelwano 'esiKhuselekileyo seLizwe leSithathu' ukuze kuthintelwe abantu abafuna indawo yokukhosela.
Ihlaziywe nge-27 kaJulayi, 2019, 2:40 am iThunyelwe ngoJulayi 26, 2019, 8:19 pm UCarolyn Kaster / AP
Umongameli uTrump kunye noNobhala woKhuseleko lweLizwe uKevin McAleenan, ekunene, kunye noMphathiswa wezangaphakathi waseGuatemala u-Enrique Degenhart kwiOfisi ye-Oval.
I-US kunye neGuatemala batyikitye isivumelwano selizwe lesithathu esikhuselekileyo ngoLwesihlanu esiya kufuna ukuba abantu abafuna indawo yokukhosela bahambe betyhutyha ilizwe laseMbindi Melika ukuba baqale bafune ukhuseleko apho, i-White House yatsho, isivumelwano esinokunciphisa kakhulu ukufaneleka kwe-asylum e-US ukuya kumawaka abantu.
Iinkcukacha zesivumelwano azizange zikhutshwe kwangoko, kodwa phantsi kolu bizo, amawakawaka abantu abafuna indawo yokukhosela abahamba betyhutyha iGuatemala, eyabelana ngomda neMexico, besuka kumazwe anjengeHonduras ne-El Salvador banokufuneka bafake isicelo sokufuna indawo yokukhosela apho ngaphambi kokuba babekho. iyakwazi ukwenza njalo e-US.
Ethetha kunye noMongameli uDonald Trump kwiOfisi ye-Oval ngoLwesihlanu, uNobhala weSebe lezoKhuseleko lweLizwe uKevin McAleenan uxelele iintatheli ukuba ukuba abantu abafuna indawo yokukhosela 'bafika e-US bengakhange basebenzise elo thuba, baya kubuyiselwa eGuatemala.'
Isivumelwano siza emva kokuba uTrump esoyikise iGuatemala ngeerhafu emva kokurhoxa kwiingxoxo zokuchongwa, kwaye inkundla ephakamileyo yaseGuatemala yathi uMongameli uJimmy Morales akanakusayina isivumelwano esikhuselekileyo selizwe lesithathu ngaphandle kwemvume yangaphambili evela kwiCongress. Akukacaci ukuba isivumelwano sangoLwesihlanu siza kudlula ngokusemthethweni.
Efowuneni neentatheli, uMcAleenan uthe isivumelwano asizukuqala ukusebenza kwangoko kuba kufuneka kubekho ixesha lokuba oorhulumente bobabini basivume kwaye basiqonde isivumelwano, kodwa “kufuneka sisebenze” ngo-Agasti. Isivumelwano siza kwenza abantu abafuna indawo yokukhosela abahamba betyhutyha iGuatemala kodwa abazange bafake isicelo sokusabela apho 'abafanelekanga' ukuba bafune ukhuseleko e-US.
UJose Cabezas / Reuters
Abafuduki bahamba emva kokuwela uMlambo iSuchiate kumda weGuatemala-Mexico.
ukuwa umbono wokuhombisa ngaphandle
Kodwa amagosa kurhulumente waseGuatemala awala uluvo lokuba isivumelwano phakathi kwala mazwe mabini yayisisivumelwano 'selizwe lesithathu elikhuselekileyo'. Iiyure emva kokuba i-White House ithe yatyikitya isivumelwano esinjalo, urhulumente waseGuatemala ikhuphe ividiyo kunye nomphathiswa wezangaphakathi elikhabayo elo bango .
'Ndicinga ukuba kubaluleke kakhulu ukuba sicacise izinto kube kanye,' utshilo uMphathiswa wezangaphakathi waseGuatemala u-Enrique Degenhart, otyikitye isivumelwano kwiOfisi ye-Oval. 'Esi ayisosivumelwano 'selizwe lesithathu elikhuselekileyo' njengoko sitolikiwe. Esi sisivumelwano esineempawu ezahlukeneyo kunye neempawu ezikhethekileyo.'
Isiteyitimenti sikarhulumente waseGuatemala sathi kumxholo wokufuduka, omabini la mazwe avumile ukusebenzisana kwisicwangciso esiza kusetyenziswa kubantu abavela e-El Salvador naseHonduras. Nangona kunjalo, le ngxelo yayingacacanga malunga nokuba abaphambukeli abasuka kula mazwe mabini baza kuthotyelwa ntoni kwaye ayikhankanyi indawo yokusabela.
IRefugees International, iqumrhu elimela abantu abavela kwamanye amazwe, yasibiza esi sivumelwano 'siyothusa kakhulu' kwaye yathi siza kubeka abantu 'kwingozi enkulu.'
'IGuatemala ayikhuselekanga ngandlela ithile kubabaleki kunye nabo bafuna indawo yokukhosela, kwaye bonke abantu abanamandla emhlabeni abazukwenza njalo,' utshilo u-Eric Schwartz, umongameli wombutho.
'Esi sivumelwano sikwaphula umthetho wase-US kwaye siya kubeka abanye babona bantu basesichengeni kuMbindi Melika kwingozi enkulu. Okwangoku, akukacaci kakuhle ukuba leliphi ilungiselelo ekuye kwafikelelwa kulo ngenxa yesigqibo sethutyana seNkundla yoMgaqo-siseko yaseGuatemala ngokuchasene nesivumelwano selizwe lesithathu. Kodwa iingxelo zikamongameli malunga noku zezona zixhalabisa kakhulu. Ilungiselelo elinjalo beliya kwenza intlekisa ingcamango yokuba abo babaleka intshutshiso kuMbindi Merika banokusabela.'
Igosa le-DHS lixelele Iindaba zeBuzzFeed ukuba iGuatemala ayinaso isakhono sokubonelela ngokhuseleko kumthamo wabantu abafuna indawo yokukhosela abaza kucela ukhuseleko apho phantsi kwesivumelwano.
iintlobo zezityalo zomdiliya
'I-US iyawubaleka umsebenzi wayo wokukhusela iimbacu,' latsho eli gosa.
Inkqubo yokukhosela yaseGuatemala ayikho, elinye igosa lase-US laxelela iMC chatel, kwaye alizukwazi ukukhusela amashumi amawaka abantu abafuna ukhuseleko.
'Urhulumente akakwazi nokubakhusela abantu bakhe njengoko kungqinwa ngamashumi amawaka abantu baseGuatemala abafuna indawo yokukhosela e-US unyaka nonyaka,' latsho igosa lendawo yokukhosela.
'Umbono wokuba iGuatemala ineenkqubo ezaneleyo zokukhuselwa endaweni yolula, ukutsho oko,' elinye igosa le-DHS lixelele Iindaba zeBuzzFeed. 'Kwakhona olu lawulo lubonisa ukungabukhathaleli ngokupheleleyo ubomi babantu bokwenyani, obubambekayo obuya kwenzakala kwaye balahleke ngenxa yoko. Uphuhliso olulusizi kakhulu.
Omar Martinez / Omar Martinez / umfanekiso-umfelandawonye / dpa / AP Imifanekiso
Abaphambukeli abavela kuMbindi Merika balinda eTijuana, eMexico, ukuze bafumane idinga lokufaka isicelo sendawo yokuhlala e-US.
isilivere kunye nemithi yekrisimesi ebomvu
IGuatemala lelinye lawona mazwe ahlwempuzekileyo kwiNtshona yeIkhweyitha yaye inezinga lesithandathu eliphezulu lokungondleki emhlabeni. Phantse isiqingatha selizwe sinengxaki yokungondleki okungapheliyo, kwaye ukuxhaphaka kufikelela malunga ne-70% kwezinye iindawo zemveli zaseGuatemala, ngokutsho kowama-2018. ingxelo evela kwi-USAID.
Ilizwe lijongene nobundlobongela kodwa liye lehla izinga lokubulala kule minyaka idlulileyo, izinga lokubulawa kwabantu liyi-22.4 kubantu abayi-100,000. Ngokuthelekisa, i-US yayinezinga lokubulala le-5.3 kubantu abayi-100,000.
Ingxelo yakutshanje yeZizwe eziManyeneyo nayo ifunyenwe ukuba malunga ne-98% yolwaphulo-mthetho eGuatemala aluzange lohlwaywe ngo-2018.
Abantu baseGuatemala benza uninzi lwe kubanjwe abaphambukeli kumda wase-US. Ukusukela ngo-Okthobha, ukuqala konyaka-mali, malunga ne-236,000 yabantu abavela eGuatemala baye babanjwa yiBorder Patrol.
I-US ngaphambili yayinesivumelwano selizwe lesithathu elikhuselekileyo kunye neCanada, isivumelwano esasayinwa ngo-2002 esaqala ukusebenza ngo-2004. Eso sivumelwano sinemikhethe: abantwana abangahambelaniyo, abantu abanosapho olusondeleyo eCanada abahlangabezana neziqinisekiso ezithile, abafaki-zicelo abaneemvumelwano ezifanelekileyo. I-visa yaseKhanada, abantu abanemvume yokusebenza okanye yokufunda, kunye nabo batyholwa ngolwaphulo-mthetho olunokubafaka kwisigwebo sentambo e-US okanye kwilizwe lesithathu.
Isivumelwano asisebenzi kubantu abafuna indawo yokukhosela abangena eCanada ngokungekho mthethweni okanye phakathi kwamazibuko okungena.
Ulawulo lukaTrump luhambise umbono wesivumelwano selizwe lesithathu elikhuselekileyo neMexico. Kunyaka ophelileyo, emva kokuba ikharavani yabafuduki baseMbindi Melika besiya kumda wase-US, owayesakuba ngunobhala wezoKhuseleko lweLizwe ngoku uKirtjen Nielsen wathi iarhente yakhe 'ikhuthaza abantu abanendawo yokukhosela okanye amanye amabango afanayo ukuba afune ukhuseleko kwilizwe lokuqala abangena kulo. kuquka neMexico.'
Nasemva kweengxoxo phakathi kwe-US kunye neMexico malunga nesivumelwano esinjalo, urhulumente waseMexico wasikhaba eso siphakamiso.
imibala yepeyinti etyheli
uyilo olugqwesileyo lweethayile zangasese
itaylor ekhawulezayo ukubukela induli
U-sherwin williams imibala yepeyinti eluhlaza okwesibhakabhaka